အကျည်းတန်သွားတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ည – Cele Love
အကျည်းတန်သွားတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ည
Posted by TheinGi on November 22, 20180Comments
မနေ့ည ပြင်ဦးလွင်တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကတော့ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။
ဘယ်နယ့်ဆောင်းတွင်းကြီး ပွဲအစီအစဉ်ကြော်ငြာသူက မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေကို ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖက် နှင်းမိုးလေးတွေ ရွာပေးလိုက်ပါဦးလို့ခိုင်းလိုက်တာ
နှင်းမိုးတင်မကဘူး ပရိသတ်ကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ထိုးပါလေရော။
စဉ်းစားပါဗျာ။ ပြင်ဦးလွင်ဆောင်းတွင်းကြီး။ အသဲခိုက်ခိုက်တုံအောင် ချမ်းလွန်းတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ညချမ်းအချိန်မှာမီးသတ်ပိုက်ကြီးနဲ့ ရေချိုးပေးတာ။ ရေစိုရုံမက ရေပါမွန်းတဲ့အထိ။ ဒီထဲမှာ ကလေးတွေလဲပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေလဲပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေလဲ ပါနိင်တယ်။
ဒါလူငယ်တွေပဲ ဆော့တဲ့ သင်္ကြန်မဟုတ်ဘူးလေ။ ထိန်းမနိင် သိမ်းမနိင်အောင် ပွဲဆူနေတာလဲမဟုတ်။ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေတာ။ အစီအစဉ်ကြေငြာသူက မူးရူးနေတာလားတော့မသိ ။ နောက်ပိုင်း နောက်တယောက်နဲ့အစားထိုးသွားတယ်။
အဝတ်အစားလဲစရာမပါတဲ့ ပရိသတ်ကြီးဟာ ဘယ်လောက်ဒေါသထွက်လိုက်မလဲ စဉ်းစားတာကြည့်။
ပရိသတ်ကစိတ်တိုလို့ ရေသန့်ဘူးတွေ ဘီယပုလင်းတွေနဲ့ပြန်ပေါက်တော့ မပစ်ကြပါနဲ့။ နောက်တခါထပ်ပစ်ရင်ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမယ်ဆိုပဲ။
မီးသတ်ပိုက်နဲ့ထိုးတာကြ ဥပဒေအရ အရေးယူလို့မရဘူးပေါ့။ ဥပဒေကသူ့ပါးစပ်ထဲရှိတာကြနေတာပဲ ဓာတ်ပိန်တာဗျာ။ ဟိုမီးသတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလဲ ခိုင်းတိုင်းလုပ်တဲ့ကျပ်မပြည်ကောင်တွေ။ ပရိသတ်ကို ဝင်ရိုက်ပါဆိုရင် ဝင်ရိုက်မလားပဲ။
မနညေ့ ပွငျဦးလှငျတနျဆောငျတိုငျပှဲကတော့ တျောတျောစိတျပကျြဖို့ ကောငျးတယျဗြာ။
ဘယျနယျ့ဆောငျးတှငျးကွီး ပှဲအစီအစဉျကွျောငွာသူက မီးသတျတပျဖှဲ့တှကေို ပှဲကွညျ့ပရိသတျဖကျ နှငျးမိုးလေးတှေ ရှာပေးလိုကျပါဦးလို့ခိုငျးလိုကျတာ
နှငျးမိုးတငျမကဘူး ပရိသတျကို မီးသတျပိုကျနဲ့ ထိုးပါလရေော။
စဉျးစားပါဗြာ။ ပွငျဦးလှငျဆောငျးတှငျးကွီး။ အသဲခိုကျခိုကျတုံအောငျ ခမျြးလှနျးတဲ့ ပွငျဦးလှငျ ညခမျြးအခြိနျမှာမီးသတျပိုကျကွီးနဲ့ ရခြေိုးပေးတာ။ ရစေိုရုံမက ရပေါမှနျးတဲ့အထိ။ ဒီထဲမှာ ကလေးတှလေဲပါတယျ။အမြိုးသမီးတှလေဲပါတယျ။ သကျကွီးရှယျအိုတှလေဲ ပါနိငျတယျ။
ဒါလူငယျတှပေဲ ဆော့တဲ့ သင်ျကွနျမဟုတျဘူးလေ။ ထိနျးမနိငျ သိမျးမနိငျအောငျ ပှဲဆူနတောလဲမဟုတျ။ အေးအေးဆေးဆေး ထိုငျနတော။ အစီအစဉျကွငွောသူက မူးရူးနတောလားတော့မသိ ။ နောကျပိုငျး နောကျတယောကျနဲ့အစားထိုးသှားတယျ။
အဝတျအစားလဲစရာမပါတဲ့ ပရိသတျကွီးဟာ ဘယျလောကျဒေါသထှကျလိုကျမလဲ စဉျးစားတာကွညျ့။
ပရိသတျကစိတျတိုလို့ ရသေနျ့ဘူးတှေ ဘီယပုလငျးတှနေဲ့ပွနျပေါကျတော့ မပဈကွပါနဲ့။ နောကျတခါထပျပဈရငျဥပဒကွေောငျးအရ အရေးယူမယျဆိုပဲ။
မီးသတျပိုကျနဲ့ထိုးတာကွ ဥပဒအေရ အရေးယူလို့မရဘူးပေါ့။ ဥပဒကေသူ့ပါးစပျထဲရှိတာကွနတောပဲ ဓာတျပိနျတာဗြာ။ ဟိုမီးသတျဆိုတဲ့ကောငျတှကေလဲ ခိုငျးတိုငျးလုပျတဲ့ကပျြမပွညျကောငျတှေ။ ပရိသတျကို ဝငျရိုကျပါဆိုရငျ ဝငျရိုကျမလားပဲ။
Cele Love is Myanmar’s popular online media and entertainment platform providing real-time news, health, knowledge, business, tech, horoscope, amazing, photos and videos for our readers. Cele Love provides the best experience through its dedicated mobile friendly site. Readers can read both Zawgyi and Unicode Font.
သစ်သီး ဟင်းသီး/ရွက် ကောင်းကျိုးများ
သွား နှင့် ခံတွင်း
© 2019 Cele Love